Ivo vanoyambira nezve rezinesi iro risiri iro rakavhurika sosi | Linux Vakapindwa muropa
Ivo vanoyambira nezve rezinesi iro risiri iro rakavhurika sosi
Iyo Open Source Initiative yambiro kune vashandisi nezve izvo zvinonzi Server Side Ruzhinji Rezinesi sezvo isingasvike nematanho eboka kutorwa seyakavhurwa sosi.
Isu takaona makambani akati wandei achisiya kuzvitsaurira kwavo kwekutanga kunharaunda yakavhurika sosi nekuchinjisa zvigadzirwa zvako zvepakati kubva kune yakavhurwa sosi rezinesi, imwe inogamuchirwa neOpen Source Initiative, kune fauxpen kodhi rezinesi Chiratidzo chefauxpen font rezinesi ndechekuti avo vakaita shanduko vanoti chigadzirwa chavo "chakavhurika" pasi peiri rezinesi nyowani, asi rezinesi nyowani rakabvisa kodzero dzevashandisi.
Izwi rekuti "Fauxpen" rakagadzirwa naTristan Louis muna 2009 uye seinobva pashoko reFrench kuratidza chimwe chinhu chiri chenhema. Mukunyora, iyo pun inorasika, saka ngatitii mataurirwo eiyo neologism fauxpen sosi ndeye fō-pən sȯrs. Yakanyanya kufanana nesource.
Kupa RAE-dhizaini tsananguro ngatiti iyo fauxpen sosi ndeiyi:
Tsananguro yesoftware inozviti yakavhurwa sosi, asi inoshaya rusununguko rwuzere runodiwa neiyo Open Source Tsananguro.
Tristan akawedzera dudziro ku:
fauxpenness: Shevedza kune yakavhurika sisitimu kana chikuva asi, kana ukanyatsoiongorora zvakanyanya, zvinoonekwa kuti iri pasi pechidziro chakasimba chemupi wako.
Fauxpen system (kana fauxpen chikuva) - Iyo sisitimu kana chikuva chinoti chakavhurika asi, pakuongorora zvakanyanya, hachisi.
1 Sei vachinyevera nezve rezinesi
2 Iyo Elastic kesi
Sei vachinyevera nezve rezinesi
Zvinoenderana neshoko rakaburitswa neiyo Open Source Initiative
Iri rezinesi rakaendeswa kune iyo Open Source Initiative kuti igamuchirwe, asi yakazobviswa nemutarisiri weraisense pazvakabuda pachena kuti zvaisazotenderwa.
Iyo OSI inojekesa pazasi musiyano uripo pakati pemhando mbiri dzemalayisensi
Open source marezinesi ndiyo hwaro hweyakavhurika sosi software ecosystem, sisitimu inokurudzira uye inofambidzana yekudyidzana software kusimudzira. Marezenisi eFauxpen anotendera mushandisi kuti aone kodhi yekodhi asi haatenderi dzimwe kodzero dzakakosha kudzivirirwa nedudziro yesosi yakavhurika, senge kodzero yekushandisa chirongwa ichi kune chero chikamu chebasa.
Iyo Elastic kesi
Nei vari kunyevera nezve rezinesi iro vazhinji vedu tisina kumbonzwa nezvaro?
Kwakavharwa nenyama, mugadziri wezvishandiso zvekutsvaga data uye kuongorora Akatumira zvinotevera pablog rake:
Tiri kufambisa yedu Apache 2.0-ine rezinesi kodhi kodhi paElasticsearch neKibana kuve vaviri vane rezinesi pasi peServer Side Public License (SSPL) uye iyo Elastic License, ichipa vashandisi kusarudza rezinesi rekushandisa. Iyi rezinesi shanduko inovimbisa nharaunda yedu uye vatengi vakasununguka uye kuvhura mukana wekushandisa, kugadzirisa, kugovera patsva uye kushandira pane kodhi. Inodzivirirawo kuenderera mberi kwekudyara kwedu mukugadzirwa kwezvigadzirwa izvo zvatinogovera mahara uye zvakavhurika, zvichitadzisa vanopa sevhisi kupa Elasticsearch neKibana sevhisi vasina kupihwa mupiro.
Kubva kuOSI vanoziva kuti:
Izvi hazvireve kuti Elastic, kana chero kambani, haifanire kutora chero rezinesi rakakodzera zvaro bhizinesi zvaro. Iyo inogona kuve rezenisi rezvivakwa, ingave yakavharwa sosi kana sosi iripo. Iyo Open Source Initiative inotenda zvakasimba kuti iyo yakavhurwa sosi yekuvandudza modhi ndiyo nzira yakanakisa yekugadzira software uye inoguma mune yepamusoro chigadzirwa. Asi isu zvakare tinoziva kuti haisi sarudzo chaiyo kune wese munhu mune zvese zviitiko. Kambani inogona kuona kuti zvayinoda uye nongedzo yebhizinesi rayo zvachinja nekufamba kwenguva, zvekuti sarudzo yelayisensi yekutanga iri kukanganisa bhizinesi modhi yayo. Shanduko inogona kunge iri sarudzo chaiyo.
Izvo zvisingakwaniswe nekambani kutora kana kureva kuti software yakapihwa marezenisi pasi perezinesi isina kubvumidzwa neOpen Source Initiative, ndoda rezinesi risingasangane neOpen Source Tsananguro, yakavhurwa sosi software.. Icho kunyepa, kuri pachena uye kuri nyore, kutaura kuti software ine zvese mabhenefiti uye zvipikirwa zveyakavhurwa sosi kana isingaite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Ivo vanoyambira nezve rezinesi iro risiri iro rakavhurika sosi
Linux ikozvino inowirirana neMac Mini M1 neApple Silicon